Cuntada: Waa maxay Darrada Daran ee Google Analytics?
Spam isku xira macluumaadka oo ku dhuftey si aaney kuu siin karin fikrado faa'iido leh oo ku saabsan dabeecadaha dadka isticmaala iyo waxqabadka boggaga internetka. Waxay saameyn ku yeelataa goobaha hela gaadiid yar (sababtoo ah haddii ay si weyn u badasho xogta) marka loo eego shirkadaha waaweyn ee kumanaan ama malaayiin aragtiyo ah.
Spam ee Google Analytics ayaa had iyo jeer ku muuqda qaybaha "Pageviews" ama "Referrals". Waxaad ku arki kartaa URL-yadooda laga shakiyay ama magacyadooda. Tusaale ahaan, maxay darrada u dhigantaa Google Analytics? Magaca 'darodar' ayaa si toos ah u soo jeedinaya in boggaaga la duubay
Sannadkan, tirada sii kordhaysa ee "Referrer Spam" ayaa lagu dabagalay GA - greifensee wappen von. Falanqee xogta booqdahaaga sannadkii la soo dhaafay oo aad fiiriso booqashada bogagga shabakadaha sida Get-Free-Traffic-Now.com, darrada bilaashka ah ee qaybta-badhanka, iyo goobaha kale ee la midka ah. Website-kaaga iyo ku dhawaadba meel kasta oo kale oo aan si aan kala sooc lahayn loo doorto waxay u badan tahay in ay u badan tahay inay helayaan kuwan xitaa baaritaankooda.Artem Abgarian, khabiir ka socda Semt wuxuu sharxayaa sida loola tacaalayo spam ee Google Analytics si looga hortago in ay jabiyaan xogtaada.
Spam GA wuxuu caadi ahaan ka yimaadaa labo siyaabood oo muhiim ah - Gudbinta Gudbinta Ghost and Refawals
Spam Ghost waxay ku dhacdaa xogta booqdaha goobta iyada oo aanad booqan goobta. Waxay tan sameyaan adigoo fulinaya code-ka GA ee goobta oo u diraya serverka GA si toos ah. Caqabada ay soo gudbiyeen jiheeyayaasha ghost waa in aan lagu xakumi karin iyadoo la isticmaalayo faylka aad .htaccess tan iyo markii ayan galin goobta. Spam Ghost waxaa badanaa laga saaraa Google Analytics iyada oo loo marayo filtering
Xakamaynta gudbinta ee taranka ayaa si muuqata u soo booqda goobtaada oo aad ku dhajiso websaydhkaaga..Iyadoo loo eegayo howlaha boogta ah ee barkan, warbixintaada GA waxay muujineysaa inaad haysatey tiro dad ah oo ka soo jeeda asal ahaan ka soo jeeda dhinacyada saddexaad iyo waxay ku qaadeen wakhti wakhti fiican oo dhexmaraya goobtaada.
Xayeysiinta boodboodka waxay booqan kartaa goobtaada si kaamil ah markiiba. Natiijada habdhaqankan, waxaad aragtaa mugdi aan la garanayn oo kufilan macluumaadkaaga taraafikada. Xeebahaasi waxay iska indho tirayaan sharciyada lagu qoray faylka robots.txt. Laakiin ka duwan sida spam qaylo-dhaanta, waxaad ka tirtiri kartaa gurguurtan adigoo xayiraya feylka .htaccess-ka ee boggaaga kaas oo xayiraya taraafikada meelaha gaarka ah waxayna ka hortagayaan in ay gaaraan goobtaada. Isticmaalka faylaha ayaa sidoo kale kaa caawin kara inaad u hesho spam tarankaaga ee GAgaaga. Tani waxaa sameeya iyada oo laga reebayo ilaha ilaha gudbinta ee aad u aqoonsatay sida spam.
Waa maxay fekerka ka dambeeya spam iyo sidee ayuu u saameynayaa goobtaada?
Waa muhiim inaad xusuusatid in spam loo diri karo goob kasta maxaa yeelay ujeedada ugu weyn ee diristu waa inay soo saarto qof kasta oo internetka ah oo iyaga gujinaya. Taasi waa fekerka guud ee ka dambeeya spam sidaa daraadeed ha ka walwalsan tahay in ay xado macluumaadkaaga ama wax. Kala-jeediyeyaashu intooda badan waa ka dib marka ay gaadiidka ku wataan goobahooda. Waxay bangiga ku hayaan xiisaha dadka, iyagoo ogyahay inaad ku jahwareerayso inaad hubiso wax kasta oo ka muuqda GA-gaaga. Hadda waxaad ogtahay sababta aadan u gujin URL kasta oo aan la garaneynin ee ku jira "Gudbinta" iyo "Pageviews" qayb ka mid ah warbixintaada GA.
Saameynta ugu weyn ee spam ee boggaaga ayaa wiiqaya xogtaada, ama ku dhufanaysa saxsanaanta macluumaadka Google Analytics. Spam hilibka ayaa si xun u saameeya heerarka xayeysiinta goobtaada sababtoo ah xirmooyinka marwalba waxay leeyihiin boqolkiiba 100%. Haddii uu jiro Gawaarida Gawaarida ee GA-gaaga, waxaa hubaal ah macnaheedu waa in qiyaastaada cirifkaagu uu ku dhacay.
Waxaa jira farriimo gudbin ah oo soo gudbiya xayawaanka xun sida fayrasyada. Tani waa sabab kale oo looga hortagayo gujinta URL-yada xawaaraha gudbinta ee Google Analytics.
Xitaa ka dib markaad dejisid shaandhada iyo wax kasta oo kale si aad u ilaalisid spam gaagaaga GA, waa muhiim inaad dib ugu noqoto xogtaada si joogto ah si aad u hubiso in ay jiraan goobo cusub oo laga shakiyay. Mar kasta oo aad sidaasi u hesho, ku dar shaahaaga iyo warbixinnada GA ee goobtaada waxay noqon doontaa mid sax ah oo faa'iido leh